राणा र राजाका बन्दुकहरूले मार्न नसकेको कांग्रेस पार्टी तपाईका उखान–टुक्काले कसरी मर्ला ? – Complete Nepali News Portal
कांग्रेस मरिहाल्ने पार्टी होइन । यो केपी ओलीको होइन, बीपी कोइरालाको पार्टी हो
जेष्ठ १८, २०७४- आदरणीय केपी ओलीजी,
मधेसको तरंगित मनोविज्ञानमा तपाईका अपमानजनक अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थपिरहेका थिए । धारिला वचनले एउटा समुदायको निरन्तर अपमान गर्नु नै तपाईको कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्री आफंै अविश्वासको प्रतीक भएपछि विश्वासको वातावरण कसरी बन्थ्यो र चुनाव हुन्थ्यो ? माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेसले यो सरकार गठन नगरेको भए चुनाव नै हुने थिएन । पहिलो पार्टीले तेस्रो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि चुनावको वातावरण बनायो । के यो कांग्रेसको कमजोरी हो ?
चार महानगरपालिकाकै हकमा पनि भरतपुरमा तालमेल नभएको भए कांग्रेस र एमालेले आधा–आधा ठाउँमा विजय हासिल गर्ने परिणामले देखायो । काठमाडौंमा एमालेले मेयर जित्दा कांग्रेसले उपमेयर जित्यो । त्यसैले सहरहरू पुरै एमालेमय भएको प्रचार सही होइन । निश्चय नै सहरी मध्यम वर्गले यसपटक कांग्रेससँग चित्त दु:खाएको देखियो । आईजीपी, राजदूत प्रकरणदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगसम्मका घटनाक्रमले कांग्रेसको परम्परागत मतदातालाई उत्तेजित नबनाएको भए राजधानीको परिणाम अर्कै हुने थियो । लोकतन्त्रवादी मत साझा र विवेकशील पार्टीमा विभाजित नभएको भए काठमाडांै महानगरपालिका कांग्रेसको हातबाट जाने थिएन । राजधानीमा एमालेको लहरले होइन, लोकतन्त्रवादीको मत विभाजनले नै यो परिणाम आएको हो ।
एमालेमा पछिल्ला समयमा एकलौटी वर्चस्वले ओलीको मनोबल बढाउनु स्वाभाविक हो । हावादारी सपनाले केही बेर जनतालाई अलमल्याउनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर देश उखान–टुक्काले अघि बढ्दैन । नेपाली राजनीतिमा ओलीले असहिष्णुता र गालीगलौजको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुभएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरूबीच आपसी विश्वास र सहकार्य बढाउनुपर्ने बेला उत्तेजना र धु्रवीकरण रोज्नुभएको छ । संविधानको भावना सहमतिका आधारमा बढ्नुपर्ने देखिन्छ । तर तपाई दूरी बढाउन कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । उहाँका लागि देशभन्दा ठूलो चुनावी परिणाम भएको छ । तर कांग्रेस त्यसो गर्न गर्न सक्दैन । के यो कांग्रेसको लाचारी हो ?
ओलीजी, तपाईलाई कांग्रेसको मरणको कथा लेख्न धेरै हतारो भए जस्तो लाग्छ । तर कांग्रेस मरिहाल्ने पार्टी होइन । यो केपी ओलीको होइन, बीपी कोइरालाको पार्टी हो । यो देशमा लोकतन्त्रको दशकौं लामो संघर्षमा हरेक गाउँमा कांग्रेस कार्यकर्ताको रगत पोखिएको छ । कांग्रेस केवल पार्टी होइन, अथक अभियान र आन्दोलन हो । राणा र राजाका बन्दुकहरूले मार्न नसकेको यो पार्टी तपाईका उखान–टुक्काले कसरी मर्ला ? तपाईले नेपाली राजनीतिमा जुन भाषा, जुन शैली र जुन अपमानको संस्कार विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो विषवृक्ष भएर भोलि तपाईकै पार्टीमा फैलिनेछ ।(नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रिय सदस्य प्रदिप पौडेलले एमाले अध्क्षय केपी ओलीलाई लेख्नुभएको खुल्लापत्र कान्तिपुरबाट लिईएको हो )
प्रकाशित मिति : जेठ १८ बिहिबार-२०७४